Leptospirosis (Leptospirosis) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Leptospirosis (Leptospirosis)
Leptospirosis (Leptospirosis) ကဘာလဲ။
Leptospirosis ဆိုတာတော့ ဖော့နှုတ်တံ (Cockscrew) ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး Leptospira interrogans လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပိုးဝင်မှုတစ်ခုပါ။ Leptospirosis ဟာ ဆီး၊ သွေး သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ တစ်သျှူးတွေမှာ ပါဝင်နေတတ်ပြီး ဒီလိုကူးစက်တတ်တဲ့ ရင်းမြစ်တွေကို ထိကိုင်မိခြင်းကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုးရှိနေတဲ့ မြေ သို့မဟုတ် ရေတွေ၊ စိုစွတ်နေတဲ့ မြေလွှာတွေ သို့မဟုတ် ပိုးကူးစက်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဆီးနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေကနေတစ်ဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ။် အထူးသဖြင့် နွား၊ ဝက်၊ ခွေး၊ တွားသွားသတ္တဝါတွေနဲ့ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါတွေ၊ မြေကြွက်တွေနဲ့ အခြားသော ကြွက်မျိုးစိတ်တွေ အစရှိသဖြင့်ဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော နားခိုရာကြီးပါပဲ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာဖြစ်စေ၊ အရိုင်းတွေမှာဖြစ်စေ ဒီပိုးကို သယ်ယူလာနိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို သူတို့ဆီးထဲကို ပို့လွှတ်နိုင်ပါတယ်။
ကုသမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် leptospirosis ဟာ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး meningitis (ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုးမတစ်ဝိုက်က အမြှေးပါးတွေရောင်ရမ်းခြင်း)၊ အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ သေဆုံးခြင်းထိကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Leptospirosis ကြီးထွားခြင်းမှာ အချိန်အပိုင်းအခြား ၂ခုရှိပါတယ်။ ပေါက်ဖွားချိန်နဲ့ ကူးစက်ချိန်တွေပါ။
ပေါက်ဖွားချိန်။ ။ ဒါဟာတော့ စပြီးကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်နဲ့ လက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးလာချိန်ကြားကာလပါ။ ဒါဟာ ၁၀ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ၂ရက်မှ ၂၆ရက်နေ့ကြားကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကူးစက်ချိန်။ ။ ဒါကတော့ ရောဂါကူးစက်တဲ့သူတစ်ယောက်မှ အခြားတစ်ယောက်ထံသို့ကူးစက်စေနိုင်တဲ့ ကာလပါ။ ကူးစက်ခြင်းဟာ ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဆီးနဲ့ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ။ လူအချင်းချင်းကူးစက်ခြင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Leptospirosis (Leptospirosis) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Leptospirosis (Leptospirosis) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Leptospirosis ရဲ့အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာတွေမှာတော့ အပိုင်း ၂ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။
ပထမအဆင့်ကတော့ ၅ရက်ကနေ ၇ရက်အတွင်းကြာတတ်ပြီး အောက်ပါလက္ခဏာတွေနဲ့ အစပြုပါတယ်။
ကိုယ်ပူကြီးခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ မျက်လုံးရဲခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း (အထူးသဖြင့် ပေါင်နဲ့ ခြေသလုံးကြွက်သားများ) ၊ အပိန့်ထခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတာတွေပါ။
နာမကျန်းခြင်းရဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ (ခုခံခြင်းကာလ) ကတော့ ၁ပတ်ကနေ ၂ပတ်အတွင်းလိုက်လာမှာပါ။ ဒီအဆင့်မှာတော့ အောက်ပါ လက္ခဏာရပ်တွေပါဝင်ပါတယ်။
Jaundice (အသားနဲ့ မျက်လုံးတို့ဝါခြင်း) ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မူမမှန်ခြင်း၊ အဆုတ်ပြဿနာများ၊ Meningitis (ဦးနှောက်အနားများရောင်ရမ်းခြင်း)၊ မျက်လုံးရဲခြင်း စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။
Leptospirosis (Leptospirosis) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Leptospirosis ဟာ Leptospira ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ တကယ်လို့များ ပြင်းထန်တဲ့ ကူးစက်မှုအသွင်ပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ Weil’s disease လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပိုးဝင်ခြင်း၊ ကူးစက်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းစသည်တို့မှဖြစ်စေ၊ သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်က ဒဏ်ရာတစ်ခုခုက အောက်ပါတို့နဲ့ထိတွေ့မိခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ခံထားရသော တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ရဲ့ ဆီး၊ သွေး၊ သို့မဟုတ် တစ်သျှူးများ၊ ဘက်တီးရီးယားရှိနေသော ရေ၊ ပိုးရှိနေသော မြေကြီး စတာတွေမှတစ်ဆင့် ဖြစ်နိုင်သလို ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသော သတ္တဝါတစ်ကောင်ကောင်ရဲ့ အကိုက်ခံရခြင်းမှလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Leptospira ဘက်တီးရီးယားဟာ အရေပြားဒဏ်ရာတွေမှတစ်ဆင့် ၊ ရေနူးနေသော အသားအရေမှတစ်ဆင့်၊ mucous membranes (နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်းနဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေမှာရှိတတ်တဲ့ ပါးလွှာစိုစွတ်တဲ့ အမြှေးပါး) တွေမှတစ်ဆင့် ၊ သို့မဟုတ် ပိုးရှိနေသော ရေကို သောက်မိခြင်း၊ ရှူသွင်းမိခြင်းစတာတွေမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်ကို ကူးစက်တာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ငါ့ဆီမှာ Leptospirosis (Leptospirosis) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Leptospirosis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ပြင်ပနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်ရသူ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနဲ့ အလုပ်လုပ်ရသူများ ။ ဥပမာ – လယ်သမားများ၊ အသီးအရွက်စားသုံးသူများ၊ သားသတ်သမား၊ ရေဆိုးမြောင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ရသူများ၊ သားသတ်ရုံအလုပ်သမားများ၊ Campers ၊ စစ်သားများ၊ မိုင်းတွင်းအလုပ်သမားများ၊ ရေချိုကန်၊ မြစ်သို့မဟုတ် တူးမြောင်းအတွင်း ရေချိုးကြသူများ စတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။
Leptospirosis (Leptospirosis) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းတွေနဲ့ သင့်မှာဒီရောဂါ ကူးစက်နိုင်ချေ ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်က မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ အောက်ပါအချက်တွေ ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
တိရစ္ဆာန်တွေ၊ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုထဲ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်
တကယ်လို့ သင့်မှာ Leptospirosisဖြစ်စေ၊ အခြား ရောဂါပိုးဝင်သည်ဖြစ်စေလို့ သံသယရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သွေးစစ်ခြင်း၊ ဆီးစစ်ခြင်း၊ သွေးရောဆီးရောစစ်ဆေးခြင်း စသဖြင့် ပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Weil’s Disease ဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်က ပုံရိပ်ဖော် နည်းပညာတွေ အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်တာမျိုးနဲ့ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက် သွေးတွေကို စစ်ဆေးတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Scan နဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှာ ပိုးတွေ ကူးစက်ခံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးကို ဆရာဝန်တွေ သိရှိစေဖို့အတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။
Leptospirosis (Leptospirosis) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရိုးရှင်းတဲ့ Leptospirosis တွေဟာ အပျော့စားတွေပဲဖြစ်ပြီး self-limiting လို့ခေါ်တဲ့ အလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Weil’s လို ရောဂါမျိုးမှာတော့ အကြောထဲထိုးသွင်းရတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရဖု့ိ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားကောင်း ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ ဘယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှာ ကူးစက်ခံနေရသလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး သင်ဟာ အခြားသော ထပ်တိုးကုသမှုတွေကိုလည်းခံယူကောင်း ခံယူရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – တကယ်လို့ သင့်မှာ အသက်ရှူခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေခဲ့ရင် သင့်ကို လေပေးစက်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့များ သင့်ရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ကူးစက်ခံရပြီး ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ dialysis (သွေးရည်ကြည်စစ်ဆေးမှု)ကို ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Leptospirosis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Leptospirosis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်များအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း။ ။ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာ အချို့သော Leptospira ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစားများအတွက်သာ ထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပြီး ကာလကြာရှည် ကာကွယ်မှုကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါဘူး။
ရေစိုခံရှူးဖိနပ်၊ မျက်မှန်နဲ့ လက်အိတ်ကဲ့သို့သော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုး မကူးစက်အောင် သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ။
ရေသေ (နံစော်နေသော ရေ)နဲ့ လယ်ကွင်းတို့ဆီမှ ဖြတ်သန်းလာသော ရေတွေကို ရှောင်ပါ။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့ထားတဲ့ စားစရာတွေ သို့မဟုတ် အစားအစာ အကြွင်းအကျန်တွေကို ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
မှန်ကန်တဲ့ ရေဆိုးစွန့်စနစ်နဲ့ ကြွက်ရှင်းလင်းရေးတွေကို လုပ်ပြီး Leptospira ဘက်တီးရီးယားတွေ ရန်မှ ကာကွယ်ပါ။
Reference: Weil’s disease. http://www.healthline.com/health/weils-disease#Overview1 Accessed September 19, 2016.
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+topics/health+conditions+prevention+and+treatment/infectious+diseases/leptospirosis/leptospirosis+weils+disease+-+including+symptoms+treatment+and+prevention . Accessed September 19, 2016.